I-Teaser ithembele ku-Blackmagic RAW Workflow | I-Assassin's Creed Valhalla I-NAB Khombisa Izindaba | I-2020 NAB Show Media Partner noMkhiqizi weNAB Show LIVE. Izindaba Zokusakaza Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » Iteyili lithembele ku-Blackmagic RAW Workflow
Iteyili lithembele ku-Blackmagic RAW Workflow
Inikezwe uSarah Janek / The Companion Photography
I-Fremont, CA - Novemba 19, 2020 - I-Blackmagic Design namuhla umemezele ukuthi okuqukethwe kwamateyi okusekela ukwethulwa kwe-Assassin's Creed Valhalla kudutshulwe ku-URSA Mini Pro 4.6K G2 eBlackmagic RAW, futhi yahlelwa futhi yafakwa esigabeni seDaVinci Resolve Studio.
Isifinyezo semizuzu eyishumi sabhalwa, saqondiswa futhi sadutshulwa i-Ubisoft Germany ngu umenzi wefilimu nochwepheshe we-stunt, i-Vi-Dan Tran. Ifilimu ephelele izohlala eziteshini ze-YouTube ze-Ubisoft ne-T7 Production, iphinde isetshenziselwe ukudala iziqeshana ezigqamile zemithombo yezokuxhumana ukusiza ukwakha ukulindeleka ngokwethulwa komdlalo.
Indaba le igxile kuHelga, isakhamuzi esinesibindi esifuna amaqhawe azomsiza avikele umphakathi, kanye nomlingisi ophambili womdlalo, u-Eivor, osukumela phezulu ukwamukela ukuthunywa.
"Kunezikhathi ezimbili kule filimu, indawo yokucima ukoma lapho abalingiswa bekhuluma khona ngokufuna lokho, bese kuthi ukulandelana okuphakathi kube yindawo yesigcawu se-flashback, ecishe ibe nomuzwa wevidiyo yomculo, enamaphuzu ama-epic nemidwebo eyinkimbinkimbi yokulwa," kuchaza uVi -UDan. “Sidubule i-3K anamorphic ngamazinga ahlukahlukene wohlaka futhi naku-4.6K ku-120fps. Lokhu kuqinisekise ukuthi lezi zimpi zibanjwa ngokushelela, kodwa futhi kusivumele ukuthi sengeze ukuthinta okuhamba kancane, ngokwesibonelo lapho udadewabo kaHelga, u-Astrid, ebhekene nekhamera futhi ekhipha izinwele zakhe. ”
Ngabasebenzi abangama-25 nabalingisi abangaphezu kwama-30 kanye nabengeziwe, bekuyinto eyamukelekile ukubuyela esiqhumeni sokuqala, yize kuthathwe ukunakekelwa ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uphephile. "Bekubalulekile ukuthi into ngayinye izwakale inesisisekelo futhi iyiqiniso, ngakho-ke sidubule endaweni emangalisayo eyakhelwe i-LARP (play action role play)," kuqhubeka uVi-Dan. "Awukho ugesi noma isibani sesitudiyo, ngakho-ke kudingeke ukuthi sincike kwinzwa ye-URSA Mini Pro ukuthola imininingwane eminingi ngangokunokwenzeka."
Ukwakha ubuhle obucebile, be-cinema obufunayo, uVi-Dan ubhangqe i-URSA Mini Pro 4.6K G2 namalensi e-Atlas anamorphic. “Inhlanganisela yayimangalisa ngokweqiniso zisuka nje. Yonke imininingwane ebengifuna ukuyifaka ezithombeni, izikhali namathoni esikhumba ibimangalisa nje, ”kuqhuba yena. “Kungijabulisile ukudutshulwa kukonke, kodwa indawo yokucima ukoma, esiyishuthe njengenkathi yesikhashana eyodwa, bekugqame kakhulu. Ikhamera idlula kubo bonke lobu buso, futhi Umkhathi uzizwa ucwiliswa kakhulu, awukwazi ukuzibamba kodwa uzizwe uyingxenye yawo. ”
Ngokuthunyelwe, uVi-Dan usebenze kuphela kuDaVinci Resolve kumaphrojekthi akhe wakamuva kakhulu. “IBlackmagic I-RAW Q5 igijimela ukuhamba kalula iye ku-Resolve, futhi ngenza konke ngaphakathi kwesoftware; ukuhlela, ibanga, ukwakhiwa kwemisindo, noma eminye imiphumela kuFusion, ”uyachaza. “Kugcina inqubo ilula ngendlela eyisimanga, kepha izici ezingaphakathi kwekhasi ngalinye lesoftware zinamandla amakhulu. Yisixazululo esifanelekile sokuthola imiphumela esezingeni eliphakeme ngokweqile, kuyo yonke ukuthola nokuthunyelwe. ”
Izithombe zomkhiqizo we-URSA Mini Pro 4.6K G2 neDaVinci Resolve Studio kanye nakho konke okunye I-Blackmagic Design imikhiqizo, iyatholakala ku www.blackmagicdesign.com/media/images.
I-Blackmagic Design idala imikhiqizo yokuhlela ividiyo yekhwalithi ephezulu kakhulu, amakhamera we-digital amafilimu, izilungisi zombala, abaguquli bevidiyo, ukuqapha kwevidiyo, ama-routers, abashintshi bokukhiqiza bukhoma, ama-recorder e-disk, abaqaphi be-waveform kanye nama-scanner yesikhathi sangempela sefilimu, i-post production kanye nezimboni zokusakaza ithelevishini. I-Blackmagic DesignAmakhadi wokubamba i-DeckLink aqalise ukuvuselela ngekhwalithi nokukwazi ukukwazi ukukhiqizwa kokuthunyelwe, ngenkathi umklomelo we-Emmy ™ wenkampani wokuwina imikhiqizo yokulungisa imibala ye-DaVinci uye wabusa imboni yethelevishini nefilimu kusukela ku-1984. I-Blackmagic Design iyaqhubeka nokuqalwa kwemishini kuhlanganise ne-6G-SDI kanye ne-12G-SDI imikhiqizo kanye ne-stereoscopic 3D futhi I-Ultra HD amafomu okusebenza. Eyasungulwa abahleli nabanjiniyela bokukhiqiza okuthunyelwe emhlabeni jikelele, I-Blackmagic Design unamahhovisi e-USA, UK, Japan, Singapore nase-Australia. Ukuze uthole olunye ulwazi, sicela uye ku www.blackmagicdesign.com.
I-Blackmagic Design eluhlaza okotshani obumnyama I-DaVinci Resolve Studio URSA Mini Pro 4.6K G2 2020-11-19
Ngaphambilini: Izinkampani ezingama-Sixty Companies-First Globalization Association
Olandelayo: IBlackmagic Design Imemezela amamodeli amasha we-Micro Micro 3G XNUMXG